Tokony Hanondrotra Ny Karama Farany Ambany Ve i Thailandy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2011 8:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, македонски, 繁體中文, 简体中文, Español, 日本語, English
Zavatra anisan'ny nampanatenain'ny praiminisitra Yingluck Shinawatra sy ny Antoko Pheu Thai ny hanondrotana ny karama farany ambany ao Thailandy izay manodididina ny 160 baht ho lasa 300 Baht (US$10) ny andro iray. Tao aorian'ny fandreseny anefa dia nilaza izy fa ampiharina amin'ny herintaona ny fanondrotana ny karama rehefa tafapetraka ny maribolan-karaman'ireo tafavoaka teny amin'ny anjerimanontolo amin'ny oktobra ho avy io (Bt15,000 na 500 dolara amerikana).
Araka ny efa nampoizina dia mandà izany fanondrotana ny karama farany ambany izany ny mpandraharaha. Efa nanome antoka ny rafitra tsy miankina amin'ny fanjakana ny governemanta fa tsy maintsy hakàna hevitra ry zareo mialoha ny hametrahana ny fanondrotana dia nilaza fa tsy maintsy maka hevitra any aminy vao manapa-kevitra momba ny fanavaozana ny karama. Ireto misy fihetseham-po avy amin'ny bilaogera :
Andrew Spooner dia mangataka ny mba hanaovana fikarohana misimisy kokoa ho fanohanana ny filàna ny fanitsiana kely ny karama:
Harrison George ao amin'ny Prachatai dia manamarika ireo teboka goavana amin'ilay adi-hevitra:
Suthichai Yoon dia manambara ny olana miandry anio praiminisitra io izay marihana fa nampiasa ny politikan'ny fakàna olona maro mba hahazoana vato’:
Aye Nai ao amin'ny Feo Demaokratikan'i Birmania (Democratic Voice of Burma) dia manoratra momba ny fiantraikan'ny karama ambany indrindra izay betsaka ao Thailandy efa misy ho 4 tapitrisa amin'ireo mpiasa mpifindra monina. Eo amin'ny 80 isan-jaton'ny mpiasa tsy tompon-tany no avy any Birmania.
Ny sarisary nampiasaina dia avy amin'ny pejy Flickr-n'i jenny downing CC License Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)